Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Mgbe onye isi ala Saudi na PM PM na -ekwu okwu ọ nwere ike bụrụ azụmahịa UNWTO dị mkpa
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Dị ka a kọrọ n'akụkọ yiri ya site Akụkọ Arab na Akwụkwọ akụkọ Saudi taa, Crown Prince Mohammed bin Salman si Saudi Arabia kparịtara Prime Minista Spain Pedro Sánchez na Mọnde.
Ha tụlere mmekọrịta dị n'etiti Saudi Arabia na Spain na ụzọ isi kwalite ha.
Ndị ọkachamara na-atụ anya na otu n'ime isi ihe kpatara mkparịta ụka a dị elu bụ atụmatụ Saudi Arabia ịtụpụta ịkwaga World Tourism Organisation na RIyadh.
Ịkwaga UNWTO HQ site na Spain gaa Saudi Arabia ababeghị na ebumnuche nke ọgbakọ UNWTO na -abịanụ mere atụmatụ maka Nọvemba na Morocco.
Ọtụtụ ndị otu UNWO ga -eme ntuli aka na ụdịrị atụmatụ a.
Ọ bụ mmegharị a kwụsịrị ma ọ bụ bidoro taa, mgbe Onye isi ala Saudi Arabia Prince Mohammed bin Salman na onye isi ala Spain Pedro Sánchez kwurịtara okwu na ekwentị?
Amaara na ọ bụghị ndị minista na -ahụ maka njem na -ekpebi isi okwu njem, kama ọ bụ ndị isi obodo ma ọ bụ ọkwa onye isi ala.
Spain bụ onye otu onye isi na -adịgide adịgide maka UNWTO. Ọ bụrụ na ịkwaga n'Alaeze Saudi Arabia ga -emezu, Saudi Arabia ga -abụ onye otu na -adịgide adịgide. Nke a ga -abụ nzọụkwụ ọzọ dị mkpa nke ike n'ụwa nke ndị njem.
Njem nlegharị anya bụ ụlọ ọrụ dị mkpa maka Spain na Saudi Arabia, mana obi abụọ adịghị ya, Saudi Arabia na -abịa napụta mpaghara a zuru ụwa ọnụ n'oge ọrịa zuru ụwa ọnụ na ijeri ijeri tinye ma kenye ya.
Saudi Arabia abụrụla onye ọbịa mpaghara UNWTO mpaghara, yana etiti mpaghara maka WTTC.
Ndị otu UNWTO bụ mba ndị minista njem na -anọchite anya ya. Ndị otu WTTC na -achịkọta nnukwu ụlọ ọrụ nzuzo zuru ụwa ọnụ nke ndị nwere mmasị na njem.
UNWTO nwere obere mmefu ego. Iji duru ụlọ ọrụ njem na njem nlegharị anya nke ụwa pụọ ​​na nsogbu dị ugbu a chọrọ nnukwu mmefu ego. Ọ chọkwara ụzọ ndu ka mma na saịtị UNWTO.
Ihe a gaara ahụ ka afọ ole na ole gara aga dị ka ihe na -agaghị ekwe omume, nwere ike bụrụzie ihe dị adị. Mba ndị na-eme njem nlegharị anya na-achọsi ike. Ha na -achọsi ike maka ego na onye ndu. Saudi Arabia nwere ike inye ha abụọ.
Ebe ọ bụla onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na Saudi Arabia Ahmed Al-Khatee pụtara, ọ bụ nọmba VIP. Ụwa na -akpọ 911 na Saudi Arabia na -aza na -aga n'ihu n'oge nsogbu a niile. Onye minista Saudi ahụ agala ọgbakọ UNWTO mpaghara ọ bụla ruo ugbu a.
Enweghị ike ikwu otu ihe ahụ maka Spain. Naanị mgbe Spain chọpụtara ezigbo ihe iyi egwu nke ịbụ onye isi ụlọ ọrụ maka UNWTO, Spain gosipụtara na kọmitii mpaghara mpaghara maka nzukọ Africa na nso nso a na Cabo Verde. Afrịka nwere mba iri ise na anọ nwere onwe ha, ọtụtụ n'ime ha na -eme ntuliaka maka ndị otu UNWTO.
eTurboNews malitere ịkọ banyere atụmatụ ịkwaga UNWTO na July. N'isiokwu a, eTN boro ebubo na isi ụlọ ọrụ UNWTO si Madrid gaa Riyadh ga -emechi United States of Tourism.
Spain na ọtụtụ mba EU enweghị obi ụtọ maka Saudi Arabia na -ewere nnukwu ọrụ dị otú ahụ na ụwa nke njem. Ha na -ewepụta ihe ọ bụlam ikike mmadụ ruo Septemba 11, mgbe ọ na -agbagharị megide mmegharị dị otú ahụ site na Saudi Arabia diplọma.
Otú ọ dị, usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị otú ahụ na -egwu n'akụkụ abụọ. Saudi Arabia na -arụ ọrụ na gburugburu ụwa na n'azụ ihe nkiri ahụ maka imebi atụmatụ ya.
Oku nke taa nwere ike ịbụ n'etiti Prime Minista Spen na Onye isi ala Saudi nwere ike ịbụ icebreaker.
Ọ bụ naanị Spain na Saudi Arabia nwere ike ịkwalite mmekorita na mmekọrịta nwere ike ịkọ nkọ ugbu a.
Correon ekwu, sị:
September 20, 2021 na 13: 18
Nke a ga -abụ, ọ bụghị naanị mperi kamakwa ihe egwu. Ọ bụghị naanị na nke a ga -abụ ihe efu, mana na -arụpụta ihe.
Ọ ka mma ịnọ naanị gị mgbe ahụ gị na ụlọ ọrụ ọjọọ.
Enweghị m ike iche maka ịga mba a maka nzukọ, ebe m na -atụ egwu maka ndị ga -arụ ọrụ ebe ahụ.
Enwere ike ọ bụrụ na ha na -akwụ m nde euro 1 kwa ọnwa, m ga -atụle ịga otu izu.